Inkqubo Yokunyaniseka Kwekhadi Letyala
Inkqubo Yokunyaniseka Kwekhadi Letyala Le yinkqubo yokunyaniseka kwekhadi lebhanki elixhaswe ngemali phakathi kwebhanki yokukhupha kunye neziko lemfundo yamaqabane elinikezela ngemivuzo ngendlela yamalungelo okufunda okuqokelelwa kwiiyunithi ezinkulu ezinamalungelo eeyure zokuthenga ngetyala amalungelo anikwe umnini-khadi ngenkcitho yakhe ngekhadi, amalungelo anikezelwe ngetyala ahlangulwe xa ethatha ikhosi yemfundo kweli ziko lezemfundo. Ukubuyisa amalungelo eeyure zokuthenga ngetyala, ibhanki iyakwenza isivumelwano sesahlulo sesivumelwano kunye neli ziko. Eyona nto kujoliso kuyo le projekthi kukuxhasa abantu ngezemali ukuba bafezekise iinjongo zemfundo kunye necandelo lezemfundo.
Intshayelelo Indawo Ethembekileyo Yokuthengisa Yorhwebo
Intshayelelo Indawo Ethembekileyo Yokuthengisa Yorhwebo Uyilo lwendawo yokwazisa lwe-1900m2 lwalufuneka, ngaphambi kokuba iindwendwe zivavanye ii-brand ezili-145 zamazwe angaphandle kwi-Salon de TE. Ukuthimba umbono wokubuk 'iindwendwe ngobomi obutofotofo kunye nothando “Uhambo lweTreyini kaDelxe” luphuhliswa njengeyona nto iphambili. Ukwenza idrama, indibano yokwamkela yaguqulwa yangumxholo wesikhululo semini ye-juxtaposed ngenkundla yemidlalo yangaphakathi yeholo yangokuhlwa yefestile enesitayile sobukhulu boololiwe befestile ekhupha ukubonwa kwamabali. Okokugqibela, indawo yemidlalo emininzi enenqanaba evula ukuya kuthi ga kwiindawo zokubonisa ezahlukeneyo.
Umtsalane Kubakhenkethi Inqaba Ngokuthanda umoya yindawo yokuhlala yenkulungwane yama-20 ebekwe ngaphakathi kwendawo eyi-10 yeehektare kufutshane nelali yaseRavadinovo, indawo eyiNtabeni yeStrandza. Ndwendwela kwaye wonwabe ekuqokeleleni amaqonga adumileyo kwihlabathi, uyilo oluchukumisayo kunye namabali osapho akhuthazayo. Relax phakathi kweegyl idyllic, yonwabela i-Woodland kunye neendlela zamachibi echibini kwaye uzive umoya weentsomi.
Umtsalane Kubakhenkethi Inqaba le yiprojekthi yabucala eyaqalwa kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo ngo-1996 iphupha lisuka ebuntwaneni ukuzokwakha inqaba eyakho, okufanayo nakwiintsomi. Umqambi ukwayilo, umakhi kunye nomyili wemilo yomhlaba. Umbono ophambili weprojekthi kukwakha indawo yolonwabo losapho, njengomtsalane kubakhenkethi.
calendar 2013 “Safari” Ikhalenda Saturday 4 December
good morning original calendar 2012 “Farm” Ikhalenda Friday 3 December
inci I-Ceramic Thursday 2 December
Isicoci Sefandesi Esibonakalayo Se-Ultrasonic Inkqubo Yokucocwa Kwamanzi Elabhoratri Inkqubo Yokunyaniseka Kwekhadi Letyala Intshayelelo Indawo Ethembekileyo Yokuthengisa Yorhwebo Umtsalane Kubakhenkethi Umtsalane Kubakhenkethi